Ireo fitaovana sy rindrambaiko web dia novolavolaina mba hanangonana vaovao avy amin'ny toerana samihafa bilaogy. Izy ireo koa dia antsoina hoe programa fanangona tranokala na fitaovana fitaterana angona angona. Raha miezaka manangona angona momba ny tranokalanao ianao, dia azonao ampiasaina ireto programa fanangonana tranonkala manaraka ireto ary haka vaovao vaovao na misy tsy misy dikany.
Ny Outwit Hub dia programa mahavariana ao amin'ny tranonkala, izay ampiasaina hanangonana tahirin-tsoratra avy amin'ny toerana an-jatony sy an'arivony. Ity programa ity dia manampy amin'ny famoahana sy famandrihana tranonkala ao anatin'ny segondra. Afaka mampiasa na manondrana ireo pejy ireo amin'ny endrika samihafa toa an'i JSON, SQL, ary XML ianao. Izy io dia mahaliana indrindra noho ny mpampiasa azy, ary ny drafitra avoakany dia mitentina manodidina $ 50 isam-bolana miaraka amin'ny fahazoana pejy avo lenta mihoatra ny 100k.
Zava-mahagaga hafa fitaovana fitaterana tranonkala . Fminer.com dia manome antsika fahazoana mora amin'ny data, ny rafitra ary ny angon-drakitra voalamina. Mandràra io tahirin-kevitra io amin'ny aterineto izany ary manohana fiteny 200 mahery, mamonjy ny angon-drakitra amin'ny endrika samihafa toy ny RSS, JSON, ary XML. Ampahafantaro anay eto fa Webhose.io no fampihetseham-pandraketan-tserasera izay mampiasa fampahalalana manokana raha mikaroka na manaisotra ny tranonkalanao..
PHP Scraper tsotra
Ity dia iray amin'ireo fandaharam-pahaizana tsara indrindra amin'ny Internet. Ny PHP Scraper tsotra dia mamolavola tahiry amin'ny alalan'ny fampidirana vaovao avy amin'ny pejy Internet manokana ary ny fanondranana data amin'ny CSV. Mora ny manala ny tranokala sy bilaogy an-jatony an'arivony amin'ny minitra mampiasa io programa io. Ny PHP Scraper tsotra dia mampiasa ny teknolojia haingam-pandeha mba haka betsaka ny angon-drakitra isan'andro, izay ilaina amin'ny ankamaroan'ny orinasa sy marika lehibe. Ity programa ity dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama ary azo alaina mora foana ao Mac, Linux ary Windows.
ScraperWiki dia manohana ireo mpampiasa maro ary manangona angona avy amin'ny tranonkala na bilaogy rehetra. Tsy mitaky download izany; Midika izany fa tsy maintsy mandoa ny loka voalohany indrindra ianao ary ny programa dia alefa amin'ny alalan'ny mailaka. Azonao atao ny mamonjy avy hatrany ny angona nangatahinao ao amin'ny fitaovana fitahirizana rahona na ny mpampiasa anao. Ity programa ity dia manohana an'i Google Drive sy Box.net ary dia aseho amin'ny alàlan'ny JSON sy ny CSV.
Ny mpanefy dia fantatra amin'ny alàlan'ny famoahana malalaka sy avo lenta. Ity fandaharan'asan'ny tranonkala ity dia ny fototry ny rahona ary manampy amin'ny fanangonana lahatsoratra an-jatony sy aman'arivony maro isan-andro. Ny sasany amin'ireo safidy lehibe indrindra dia ny Crawlera, Bot Counter Measure, ary Crawl Builder. Ny mpangalatra dia afaka manova ny tranonkalanao manontolo amin'ny votoatiny voalamina tsara ary manavotra izany ho an'ny fampiasana amin'ny aterineto automatique. Ny drafitry ny Premium dia handany anao manodidina $ 30 isam-bolana Source .